Ungabuyekezwa kanjani ngolimi olusha lwebhizinisi
Umphakathi wethu uhlala ushintsha futhi ngokufika nokuthuthuka kobuchwepheshe obusha yonke into iqala ukuhamba ngokushesha nangokushesha, kusukela ezinqubweni zangaphakathi...
by Ithimba le-SND amahora 3 edlule amahora 3 edlule
Top 8 TikTok Hacks Ukukusiza Ukuthola Ukuthandwa Okuningi
Isingeniso: I-TikTok wuhlelo lokusebenza lwenkundla yezokuxhumana oluthola ukuduma nsuku zonke. Uma ungakayisebenzisi, cishe uyazibuza ukuthi iyini...
by Ithimba le-SND amahora 22 edlule amahora 22 edlule
Lawa Amathiphu Awusizo Azokusiza Uthole Isinxephezelo Ngemva Kwengozi Yemoto
Uma uke waba sengozini yemoto, uyazi ukuthi kungaba yinto ebuhlungu kakhulu. Awugcini nje ngokubhekana ne...
by Ithimba le-SND Izinsuku 7 edlule Izinsuku 7 edlule
Ukuqapha Okuhle Kakhulu Komlayezo Wombhalo Womzali
Njengoba izingane ezineminyaka emihlanu ubudala zithola ama-smartphones, ukuzishiya zodwa namafoni azo kungaba yingozi. Kusukela kubuxhwanguxhwangu be-inthanethi kuye ebugebengwini bokweba imininingwane ebucayi kuye ngisho...
by Ithimba le-SND 1 iviki edlule 1 iviki edlule
Yini I-Malware, Futhi Ungakugwema Kanjani Ukuba yisisulu?
Kungenzeka ukuthi uke wahlangabezana negama elithi uhlelo olungayilungele ikhompuyutha ngaphambilini kodwa mhlawumbe awukacabangi kakhulu ngalo. Inqobo nje uma kukhona uhlelo lokulwa namagciwane olufakiwe...
I-WhatsApp Yehlula I-Facebook Njengohlelo Lokusebenza Oluphezulu Lwemiyalezo Yomphakathi, Uthi Umbiko Omusha
I-WhatsApp iyisevisi yemiyalezo yeqembu edumile, futhi ngokombiko omusha, amaphesenti angama-44 ayisebenzisa okungenani kanye ngesonto uma kuqhathaniswa nama-35 ...
by UMike Stenger 1 iviki edlule 1 iviki edlule
Indlela Yokunxeshezelwa Ngemva Kokusekela Ukulimala Okubi Emsebenzini
Uma uke walimala emsebenzini, ungase uzibuze ukuthi ungathola kanjani isinxephezelo ngokulimala kwakho. Lokhu kungaba inqubo enzima,...
Ukuvikela ubumfihlo bakho (kanye nolwazi lokuxhumana) lapho uthenga ikhaya lakho elilandelayo
Uma uthenga indlu, uyazi ukuthi isipiliyoni singakukhokhisa kanjani. Ulungisa izinto ozifunayo nezidingo zakho, ulwazi mayelana nemakethe e...
Uyini Umuzwa Wesithupha futhi singawuthuthukisa kanjani?
Abantu baziwa ngokuba nezinzwa ezinhlanu, kodwa izangoma eziningi ezithenjwayo zithi sinomuzwa wesithupha. Abantu baphinde bakubize ngokuthi “intuition” noma “amathumbu...
by Ithimba le-SND Emasontweni 2 edlule Emasontweni 2 edlule
Ubani Okufanele Asebenzise I-Peptide Eye Serum?
I-Peptide eye serum inezinzuzo eziningi, futhi kufanele ithathwe njengesisekelo sohlelo lwakho lokunakekela isikhumba. Iyakhanyisa futhi inciphise ukushintsha kombala esweni...
Ibiza malini I-Wellington SEO Optimization?
Uma ucabanga ngamasu okuthengisa edijithali, cabanga ukuqasha uchwepheshe we-Wellington SEO. Bangakusiza wenze iwebhusayithi yakho ibonakale kwesokudla...
Izinzuzo zeloli leBillboard yamaselula
Iloli le-billboard liyindlela enhle yokukhangisa e-Boston nakwamanye amadolobha. Iningi labantu lichitha cishe amahora ayishumi nanhlanu ngeviki e...
Isaziso Somthetho kanye Nenqubomgomo Yobumfihlo
© 2022 Wonke Amalungelo Agodliwe